ပနားမားနှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားတွင်စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
အကောင်းဆုံး ပနားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ကိုယ်စားလှယ် နှင့်ရှေ့နေများ Panama တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများပနားမားရှိ Residency အစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ပနားမားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သည်ပနားမားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ပနားမားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှ Residency၊ ပနားမားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှ Residency၊ ပနားမားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနေထိုင်မှု၊ ပနားမားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency နှစ်နိုင်ငံ၊ ပနားမားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ ပနားမားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်ခွင့်၊ ပနားမားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ပနားမားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ပနားမားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ပနားမားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ပနားမားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ပနားမားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ပနားမားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ပနားမားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ပနားမားရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်၊ ပနားမားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ပနားမားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပနားမားနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ် ပနားမားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပနားမားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ပနားမားရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပနားမားရှိသံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပနားမားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပနားမားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပနားမားရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ် ပနားမားရှိရွှေဗီဇာ၊ ပနားမားရှိရွှေဗီဇာ၊ ပနားမားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ, ပနားမားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ပနားမားရှိဒုတိယဗီဇာ၊ ပနားမားရှိဒုတိယဗီဇာအစီအစဉ်၊ ပနားမားရှိရွှေဗီဇာနှစ်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံသားနှင့်ပနားမားရှိရွှေဗီဇာနေထိုင်ခြင်း နှင့်ပနားမားရှိရွှေဗီဇာ၊ ပနားမားရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ ပနားမားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ပနားမားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ
ထပ်မံအထောက်အပံ့ဖြင့်ပနားမားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက်ပနားမားတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - အမေရိကန်ဒေါ်လာ 365,000
ပနားမားသမ္မတနိုင်ငံသည်ကိုလံဘီယာနှင့်ကော့စတာရီကာတို့အကြားတည်ရှိပြီးလူ ဦး ရေ ၄.၁ သန်းရှိပြီးမြေအကျယ်အ ၀ န်း ၇၆၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာရှိသည်။ ပနားမားသည်အစိုးရ၏တရား ၀ င်ပုံစံဖြင့်မဲပေးခြင်းကိုအခြေခံသည်။ လက်ရှိသမ္မတ Juan Carlos Varela သည်ယခင်ဘဏ္financialာရေးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ လေထုသည်အပူပိုင်းဒေသဖြစ်သည်။
ပနားမားသည် ၁၉၀၃ ခုနှစ်အထိကိုလံဘီယာနိုင်ငံအတွက်အရေးပါခဲ့သည်။ အမေရိကန်မှစပွန်ဆာဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ယူအက်စ်အေသည်ရေလမ်းကြောင်းပေါ်မှစတင်ခုတ်ထွင်ရန်အခွင့်အရေးယူခဲ့သည်။ အလုပ်ကို ၁၉၀၃ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၁၄ ခုနှစ်တွင်အပြီးသတ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၉ တွင်ရေလမ်းနှင့်၎င်း၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရုံးများနှင့်အခြေစိုက်စခန်းများသည်ပနားမားသို့ပြန်လာပြီးနိုင်ငံအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်ဘဏ္financialာရေးအခွင့်အလမ်းများကိုချေးယူခဲ့သည်။
စီးပွားရေးနှင့်အပြန်အလှန်လဲလှယ်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ အမေရိကန်၏ပနားမားအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အလွန်အဖိုးတန်ပြီး၊ ပနားမားတွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်မှတ်သားဖွယ်အကောင်းဆုံးအချက်များရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေအမြစ်တွယ်နေသောဘဏ္areaာရေးနယ်ပယ်သည်၎င်း၏ရှေ့ပြေးအစိတ်အပိုင်းများကိုမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမြင့်မားသောမျှော်လင့်ချက်များကိုတောင်းခံခဲ့သည်။
ပနားမား၏သေးငယ်သောအရွယ်အစားရှိသော်လည်း၎င်းသည်သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသမျှသောတိုင်းပြည်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်ပွင့်လန်းလာသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းပနားမားသည်စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်အတော်အတန်ရှိခဲ့သည်။ ပနားမားသည်ခိုင်မာသည့်အုတ်မြစ်နှင့်မြောက်အမေရိကအနီးရှိကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးမြို့ပြအဆောက်အအုံများကိုကမ်းလှမ်းထားသောကြောင့်ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးကန့်ကွက်မှုများအကြားကွဲလွဲနေသည်။ အနိမ့်ဆုံးအသုံးစရိတ်သည်သင့်အားအလွန်အမင်းများပြားစေနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်သင်နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးတစ်ခုခုပေါ်မှာနေထိုင်နေသည်ဖြစ်စေဒီနေရာမှာဘဝဟာရိုးရှင်းပြီးလေထန်ပြီးပျော်စရာကောင်းတယ်။
လူတစ် ဦး လျှင်လစဉ်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ဖြင့်အသက်ရှင်နိုင်သည့်ပနားမား၏အစိတ်အပိုင်းများရှိသည်။ သင်လှပသောရှုထောင့်မှအိမ်နီးချင်းဒေသခံများအထိများစွာသောအားနည်းချက်များနှင့်ပညာရှင်များစွာကိုရှာမတွေ့နိုင်သည့်နေရာများ။
ပနားမား၏ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုသည်၎င်း၏ရှေ့တန်းအုတ်မြစ်၊ အမေရိကန်နှင့်ရင်းနှီးမှု၊ အလွန်ကောင်းသောရှုခင်းနှင့်နူးညံ့သောလေထုတို့နှင့်များစွာသက်ဆိုင်သည်။ မြောက်အမေရိကနှင့်အတိတ်မှအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့်ထူးခြားသောအားသာချက်များကိုပေးထားသည့်ပင်စင်စားအစီအစဉ်နှင့်အတူတွဲဖက်ပြီးသင့်တွင်အကောင်းဆုံးအနားယူရန်ရည်မှန်းချက်ရှိသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ပနားမားလူမျိုးများသည်တွေ့ဆုံမှုများကိုဂရုမစိုက်ကြသောကြောင့်မည်သည့်ကိစ္စရပ်နှင့်မှဝေးဝေးနေပါ။ ပနားမားတွင်နေရာအနှံ့အပြား၌အမှားအယွင်းများရှိသော်လည်း၊ သငျသညျကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမည်သည့် setting ကိုမရလိမ့်မယ်သင်အဆင်ပြေလိမ့်မည်ဟုသောလိမ္မာပါးနပ်ခြင်းနှင့်မှန်ကန်သောအကဲဖြတ်မှုကြောင့်ညီမျှအသုံးပွုပါ။
များစွာသောအမေရိကန်ဗီဇာသည်ပနားမားတွင် ၀ ယ်ယူခြင်းအတွက်အပိုကုန်ကျစရိတ်များမပေးရ၊ ATM စက်များအသုံးပြုရန်မှာခက်ခဲသော်လည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝါယာကြိုးရွေ့လျားမှုသည်အိမ်နှင့်တူသည်။
ပနားမားလူမျိုးများသည်သူတို့၏တိုင်းပြည်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးတစ် ဦး ချင်းအနေနှင့်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ ထို့အပြင်သင်သည်စပိန်ဘာသာစကားဖြင့်စကားမပြောနိုင်သည့်အဖြစ်အပျက်တွင်သင့်အားတစ်ညကူညီရန်အားထုတ်မှုကိုပင်ဖယ်ထားလိမ့်မည်။
ပနားမားတွင်မတူညီသောလူမျိုးစုများကိုအတိအကျသိသိသာသာကောင်းမွန်စွာနေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ စုံတွဲတစ်တွဲအနေနှင့်သင်သည်ပနားမားတွင်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၁,၉၉၅ ဖြင့်အလွယ်တကူနေထိုင်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်သည်သင်၏စံပြနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောဘဝလမ်းစဉ်ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သကဲ့သို့သင်အလွန်များပြားသော၊
ပနားမား၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများသည်လက်တင်အမေရိက၌အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်သည်မြောက်အမေရိကထက်သိသိသာသာနည်းပြီးစောင့်ရှောက်မှု၏သဘောသဘာဝသည်အလွန်အံ့သြစရာကောင်းသည်။ ပနားမားမြို့သည်ဆေးခန်း၏ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှအဆင့်မြင့်ဆေးခန်းများ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပြင်ဆင်ထားသည့်အထူးကုဆရာဝန်များကိုပေးသည်။ ဝေးလံသောဒေသများရှိအနီးအနားရှိစင်တာများရှိသည်။ ထိုနေရာတွင်သင်ပနားမားရှိဆေးခန်းများမှပုံမှန်လာရောက်လည်ပတ်သောအထူးကုများကိုမကြာခဏတွေ့လိမ့်မည်။ မြို့ကြီးပြကြီးများတွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်အရေးပေါ်ဆေးခန်းများနှင့်သခင်များရှိသည်။ သင်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည်ဖြစ်စေသင်သည်အင်္ဂလိပ်စာပြောရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူအားသင်၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်နေရာမကြာခဏရှာနိုင်သည်။
လမ်းအသစ်များနှင့်ငြမ်းသစ်များကိုအစဉ်မပြတ်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်လက်ခံနိုင်သောကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ၊ ပနားမားဒေသများစွာတွင်သင်၏မီးဖိုချောင်မှရေကောင်းရေကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများရှိနေသေးသော်လည်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆက်တိုက်လျော့နည်းသွားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပနားမား၏အခြေခံသည်လက်တင်အမေရိကတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
ပနားမား၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အချိန်ထုတ်ယူခြင်း
သဘာဝမှတဆင့်အသကျရှငျ၏5နှစ်ကြာပြီးနောက်
ဘဏ်အပ်ငွေ၊ အိမ်ခြံမြေ / ပင်စင်
အဘယ်ကြောင့်ပနားမား၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ဘို့သွားရ
ပနားမားသည်လူကြိုက်များသောအခွန်အတန့်နှင့်အမြောက်အမြားနေထိုင်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ပနားမား၏အခွန်ကောက်ခံမှုဥပဒေများအရနေထိုင်ခွင့်ပြုပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သူ၏တစ်ကမ္ဘာလုံး ၀ င်ငွေအပေါ်မည်သူမျှအခွန်ပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်သည်။ ပနားမားတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုတရားဝင်တင်ဒါအဖြစ်မည်သည့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဆိုငွေလဲလှယ်နှုန်းအတက်အကျရှိခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးထားသည်။ ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ပြီးပါကခွင့်ပြုချက်မပေးမချင်းပနားမားတွင်နေထိုင်ရန်လျှောက်ထားသူအားပနားမားကမည်သည့်အစီအစဉ်ကမျှဖိအားပေးခြင်းမရှိသော်လည်းအလွန်ကောင်းမွန်သောအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ရာသီဥတုအပြင်အလွန်ဈေးချိုသောလူနေမှုကုန်ကျစရိတ်သည်၎င်းအတွက်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောဒုတိယနေရာဖြစ်သည် အများကြီး။
နေထိုင်ခွင့် Panama ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် insite
လက်ရှိတွင်ပနားမားကမ်းလှမ်းသောနေထိုင်မှုအစီအစဉ် (၈) ခုရှိသည်။ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများအကြောင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
၎င်းသည်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရရှိရန်အမြန်ဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာတင်ခြင်းသည် ၂ လခန့်ကြာသည်။ ထိုင်ဝမ်၊ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ၊ ယူအက်စ်အေနှင့်ဗဟိုနှင့်တောင်အမေရိကရှိအချို့သောနိုင်ငံများသည်ဥရောပနိုင်ငံများမှနိုင်ငံသားများကိုရထိုက်ခွင့်ရှိသည်။
ဤအစီအစဉ်အတွက်လျှောက်ထားရန်အတွက်ဘဏ်အပ်ငွေနှင့်ပနားမားတွင်အလုပ်အကိုင်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုကဲ့သို့သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရန်။ လျှောက်ထားသူနှင့်မိသားစုသည်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ပါမစ်ကိုလက်ခံရရှိပြီး ၅ နှစ်အကြာတွင်နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
နိုင်ငံခြားအစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှလစဉ်ပင်စင်လစာရရှိသောပင်စင်စားများသည်ဤအစီအစဉ်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသည်။ လျှောက်ထားသူများသည်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးနေထိုင်ရာနေရာတွင်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းသက်သေပြသည့်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုလည်းပေးရပါမည်။ ဒီ status ကိုခွင့်ပြုပြီးတာနဲ့သူကအနာဂတ်ဥပဒေပြဌာန်းအပြောင်းအလဲများအားဖြင့်ကာကွယ်လိမ့်မည်။ ဤအစီအစဉ်၏အဓိကအားနည်းချက်မှာနောက်ပိုင်းတွင်ပနားမားနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်လျှောက်ထားရန်အခွင့်အရေးမရှိပါ။
၃။ Means of Person (POM) ဗီဇာ
ပင်စင်စားမဟုတ်သူနှင့် 'Friendly နိုင်ငံများ' မှနိုင်ငံသားမဟုတ်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုသည်ပနားမားနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအာမခံရန်အတွက် POM ဗီဇာကိုဆိုလိုသည်၊ ၎င်းမှာပစ္စည်းကိုဝယ်ယူရန် (သို့) ဘဏ်အပ်ငွေကို (၂) နှစ်ကြာထိန်းသိမ်းထားရန်လိုအပ်သည်။ ။
ယာယီ POM ဗီဇာသည်တစ်နှစ်သက်တမ်းရှိပြီးဒုတိယ နှစ်မှစ၍ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ၅ နှစ်နေထိုင်ပြီးနောက်နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီပါသည်။
ဘဏ်အပ်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ကိုအဓိကလျှောက်ထားသူမှပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီးမှီခိုသူတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်နောက်ထပ်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ထပ်မံလိုအပ်သည်။
တရားဝင်အခကြေးငွေနှင့်ကုန်ကျစရိတ်စုစုပေါင်းပမာဏသည်များသောအားဖြင့် USD ၃၀၀၀ မှ ၅၀၀၀ အထိရှိသည်။ လျှောက်ထားသူသည်အလုပ်ပါမစ်ရရှိလိုပါကသို့မဟုတ်ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လိုပါကအပိုကုန်ကျစရိတ်များကိုပေးဆောင်ရမည်။
လျှောက်ထားသူအငြိမ်းစားပင်စင်စားအဖြစ်တစ်လလျှင်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ရရှိရန်လိုအပ်သည်။ မည်သည့်အပိုဆောင်းမှီခို, တစ်လလျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1,000 ။
အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀၀ ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်၊ ဘဏ်အပ်ငွေတစ်ခုသို့မဟုတ်ထိုနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ အနည်းဆုံး ၂ နှစ်ခန့်ကြာအောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ ထို့အပြင်လျှောက်ထားသူသည်နေထိုင်စဉ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးပနားမားရှိလူနေမှုကုန်ကျစရိတ်များကိုထောက်ပံ့ရန်ငွေအလုံအလောက်ရှိကြောင်းအထောက်အထား။
ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ပနားမားအတွက် ပနားမားရှိဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအားပနားမားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံသား ၃၇ နိုင်ငံရှိပနားမားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးများမှနိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပနားမားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ပနားမားမှ Golden Visa သို့မဟုတ်နေထိုင်ရာပနားမားမှဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှနိုင်ငံသားအဖြစ်ကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လိုပါကပနားမားမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုကူညီသည်။ ပနားမားသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ပနားမားရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်အခြားအရာများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ပနားမားအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ပနားမားအတွက်ပနားမားအတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ၊ ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်၊ ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်နှင့်ပနားမားအတွက်လူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီ
ပနားမားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ပနားမားရှိရွှေဗီဇာ။
ပနားမားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ပနားမားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ပနားမားမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ပနားမားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
ပနားမားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ပနားမားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ပနားမားမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအထိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ ၀ င်ငွေကောင်းကောင်းရသင့်သည်ဟူသောအမြင်နှင့်ပနားမားရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုထောက်ပံ့မှုပေးသည်။ သူတို့သည် Panama အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်သူတို့ပြုလုပ်ထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထွက်ခွာလိုလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပနားမားရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်သူများနှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီး၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများသည်ပနားမားရှိကောင်းမွန်သောနေရာများတွင်တည်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးအကျိုးအမြတ်ကိုရရှိစေသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ပနားမားနေထိုင်ခွင့်
ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏နေထိုင်မှုသည်အောင်မြင်စွာနေထိုင်ခွင့်အတွက်ပနားမားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ပနားမားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency ဖြင့်နေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများကပနားမားသို့ပနားမားသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကိုပနားမားအတွက် Residence Permit ရယူရန်နှင့်ဖောက်သည်များအားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် First Diligence ကိုပြုလုပ်သည်။
ပနားမားအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့်ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဖောက်သည်များနှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူကူးရန်လိုအပ်သည်။
ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်း။ ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့် Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ဖြည့်စွက်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
Panama မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုသင်နှင့်အတူမျှဝေပြီးအခြားအထောက်အပံ့များအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ပနားမားရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားပနားမားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့် Residency ကိုထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်ပနားမားမှလက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ပနားမားတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ပနားမားတွင်သို့မဟုတ်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ပနားမားရှိတရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ပနားမားအတွက် ပနားမားရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ပနားမားရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်မှု၊ ပနားမားတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့တွင်ပါ ၀ င်သောပနားမားအတွက်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ပနားမားအတွက်ထောက်ပံ့မှုကိုမရပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ပနားမားအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ပနားမားအတွက် ပနားမားရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ပနားမား ပနားမားရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် ပနားမားအတွက်ရှေ့ရပျ ပနားမားရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုဆိုင်ရာကိစ္စများကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားမပံ့ပိုးပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ပနားမားနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျမှန်ကန်စေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ ပနားမားအာဏာပိုင်များမှလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် ပနားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်ပနားမား၏ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များကြောင့်ကျွနု်ပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ပနားမားအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုပနားမားသို့ထောက်ပံ့ပေးသည့်ပနားမားသို့ Residency နှစ်နှစ်အတွေ့အကြုံနှစ်များစွာရှိသည်။
ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့ရွက်များနှင့်ပနားမားအတွက်တရား ၀ င်ကိုယ်စားလှယ်များမှအတွေ့အကြုံရှိသော Residency သည်ဖောက်သည်များအားထောက်ပံ့မှုပေးသည်
သင်၏ပနားမားအတွက်နေထိုင်မှုမတိုင်မှီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ပနားမားအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့အတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းမှ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသောပနားမားအပါအ ၀ င်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိသည်။
အမှု၌သင်ပနားမားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့်သူတို့၏အသက်များအပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ပါ။ ပနားမားအတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အရ Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အခြားကုန်ကျမှုများပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ပနားမားအတွက်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားတွင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူပနားမားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေနှင့်၊ သင်ပနားမားတွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
Panama အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံခြင်းဖြင့် Residency မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားတွင်လည်းစီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပနားမားနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေရန်ပနားမားအတွက်အခြားအကြံပေးများကပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်မတွေ့ရပါ။
မိသားစုများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို၎င်းတို့၏ပန်းတိုင်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များပြည့်မီစေရန်အတွက်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်ခံများ၊ အကြံပေးများနှင့်ပနားမားတွင်နိုင်ငံတကာနှင့်နိုင်ငံတကာမှ Panama အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ကိုကျော်လွန်သောကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ကိုထောက်ခံသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် or Offshore နှင့် 106 နိုင်ငံများ (ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပိုမိုသက်သာသည်။ )
ပနားမားသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ပနားမားရှိကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် ပနားမားရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, ပနားမားအတွက်အတိုင်ပင်ခံလိုအပ်ပါတယ် ပနားမားအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ပနားမားရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် သင်အစီအစဉ်ဆွဲလျှင်ပနားမား ပနားမားရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးစတင်ရန် ပနားမားအတွက်ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
ပနားမားရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ပနားမားရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ပနားမားတွင်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ပနားမားအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ပနားမားအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ပနားမားအတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, ပနားမားအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ပနားမားရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
ပနားမားတွင် setup ကိုစီးပွားရေး
Residency ပြီးနောက်ပနားမားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပနားမား.
ပနားမားတွင် Web ဒီဇိုင်း
ပနားမားရှိ web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ပနားမားတွင် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
ပနားမားရှိ App Development
ပနားမားအတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ပနားမားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပနားမားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ပနားမားအတွက်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ပနားမားတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ ပနားမားတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ပနားမားအတွက်နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်၊ ပနားမားတွင်နေထိုင်ခွင့်ကိုအတည်ပြုပြီးသည်။
ပနားမားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency မှသင်၏ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက်ပနားမားအတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ သင်ပနားမားသို့ရောက်ရှိလျှင်သို့မဟုတ်ပနားမားသို့သွားရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤနေရာတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ သင်ပနားမားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ပါကပနားမား၏ပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ပနားမားကောင်စစ်ဝန်ရုံးကအက်ပလီကေးရှင်းကိုတရားဝင်ဖြစ်စေတရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - ပနားမားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှနေထိုင်ခွင့်
စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ပနားမားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ပနားမားနိုင်ငံသို့နေထိုင်ခြင်းကိုပနားမားသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ ပနားမားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်လျှောက်ထားခြင်း၊ ပနားမားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ပနားမားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ပနားမားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ပနားမား။
ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ပနားမားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်း ပနားမားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်ခွင့် ပနားမားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနေထိုင်ခွင့် ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၏နေထိုင်မှု
ပနားမားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုပနားမားရှိစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ပနားမားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပနားမားနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ ပနားမားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားခံယူထားသည့်ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ပနားမားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ပနားမားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားအကောင်းဆုံးနှင့်ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသား ပနားမားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ပနားမားရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ | ပနားမားမှလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ | စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ | စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးပနားမားအတွက် ပနားမားအတွက်လူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ပနားမားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုအိမ်ရာမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ပနားမားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ပနားမားနိုင်ငံ၏တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းစသည်ဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပနားမားအတွက်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ပနားမားရှိဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ပနားမားအတွက်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊ ပနားမားရှိအကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ပနားမားရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှပနားမားအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ။
ပနားမားအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု ပနားမားရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ပနားမားရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ပနားမားရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ပနားမားအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
ပနားမားရှိရွှေဗီဇာကိုအစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့ဖြင့်ပနားမားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပနားမားနိုင်ငံသို့နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုခြင်းစသည်ဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပနားမားသို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ ပနားမားရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ပနားမားရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ပနားမားအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအကြံပေးများ၊ ပနားမားရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ပနားမားရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှပနားမားအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
ပနားမားအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ပနားမားရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ပနားမားရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ပနားမားရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ပနားမားအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
ပနားမားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
ပနားမားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၆၅၀၀၀ ဖြစ်သည်။
သင်ပနားမားအတွက် Residency အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တရားဝင်အထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်, ပနားမားရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်ပနားမားရှိအေးဂျင့်များသည်ပနားမားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။
ပနားမားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များကြောင့် Residency သည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency အတွက်ပနားမားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြေးကိုသာပေးဆောင်ရသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများဖြင့် Residency အတွက်အခြားအထောက်အပံ့များကိုလည်းပေးသည်။
မည်သည့်နိုင်ငံသားများသည်ပနားမားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသို့မဟုတ်ပနားမားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဗီဇာဖြင့် Residency လျှောက်ထားနိုင်သနည်း။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သည်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆိုနိုင်ငံသားများအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အာရှမှပနားမားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အာဖရိကမှပနားမားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဥရောပမှပနားမားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ တောင်အမေရိကမှပနားမားသို့ Residency၊ မလေးရှားမှပနားမားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှပနားမားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အင်ဒိုနီးရှားမှပနားမားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ သီရိလင်္ကာမှပနားမားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ နီပေါမှပနားမားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ အိန္ဒိယမှပနားမားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Residency နှင့် Residency ယူအေအီးမှပနားမားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု ပနားမားအတွက်
ပနားမားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency တွင်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
အဝေးပြေးလမ်းနှင့်မော်တော်ယာဉ်များ ဦး စီးဌာန
The News Herald သတင်းစာ
ကလေးများအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများ - US EPA မှဖြစ်သည်
ဖလော်ရီဒါစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်း ဦး စီးဌာန (လူထုစီမံကိန်းဌာန)
အခွားသော Links များ
WMBB- တီဗီ 13
ပနားမားမြို့မီးသတ် ဦး စီးဌာန
Marina Civic စင်တာ
Bay Life မဂ္ဂဇင်း
ဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ် - ပင်လယ်အော်ကောင်တီသမဝါယမတိုးချဲ့ခြင်း
ဖလော်ရီဒါအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ Code ကို
link ကိုမှ ပနားမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ပနားမားရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်